Rhinoceros lehibe - Biby dia - Pejy fandokoana maimaim-poana
Pejy fandokoana isan-karazany amin'ny lohahevitry ny rhino no miandry anao eto amin'ity pejy ity. Ny pejinay fandokoana dia nalaina araka izay azo atao mba hanomezana fahalalahana mamorona araka izay azo atao ny zazavavy sy ny zazalahy. Faly izahay manome sary antsipiriany momba ny fangatahana.
Rhinos pejy fandokoana
Ireo biby manokana ireo dia manaitra ny ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny tanjany ary koa tandindonin-doza raha manorisory azy ireo tsy amin'antony ianao. Ny tsindry iray amin'ireto rohy manaraka ireto dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Rhinoceros pejy fandokoana - biby
Pejy fandefasana rhinoceros | Bibidia
Rhinoceros pejy fandokoana - bibidia
Pejy misy ny bibidia rhinoceros
Badia pejy fandokoana - rhinoceros